Tout sur le checkout d'Instagram - Winches ကလပ်
ယခုအခါ Instagram Checkout ကိုအမေရိကန်ရှိအရည်အချင်းပြည့်မီသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးတွင်အသုံးပြုနေပြီးမကြာမီကာလအတွင်းကမ္ဘာအနှံ့သို့သွားပါလိမ့်မည်.
Checkout အင်္ဂါရပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Insta app မှထုတ်ကုန်များကိုတိုက်ရိုက် ၀ ယ်ယူခွင့်ပြုသည်. အခုမှစပြီး, ငါတို့ကြိုက်နှစ်သက်ရာကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်များနှင့်စျေး ၀ ယ်နိုင်သောပို့စ်များကိုစူးစမ်းသောအခါငါတို့သည်မှာယူမှုများကို Insta တွင်တိုက်ရိုက်တင်နိုင်သည်.
Instagram အရ, 130 millions d’utilisateurs cliquent chaque mois sur des posts shoppable, Instagram သည်ယခုလုပ်ဆောင်ချက်ကိုထည့်သွင်းလိုက်ခြင်းသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ ” ထွက်ခွာသည် ” အမေရိကန်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးတွင်ရနိုင်သည်.
လူကြိုက်များမှုမြင့်တက်လာသည် “စျေး ၀ ယ်နိုင်သောပို့စ်များ” Insta သည် e-commerce ပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲခဲ့သည်. ယခုငွေရှင်းစနစ်သည်ဤပြောင်းလဲမှုကိုဖြည့်စွက်ပြီးသုံးစွဲသူများ၏အတွေ့အကြုံကိုပိုမိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်.
ယခုငါတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်ကို နှိပ်၍ ထိုထုတ်ကုန်အတွက် Instagram ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်ပေးချေနိုင်သည်. ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ယ်ယူမှုသည်အခြားမည်သည့်လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းတွင်မဆိုလွယ်ကူသည်.
သူတို့ကငါတို့စျေးဝယ်တဲ့ပုံစံကိုလုံးလုံးလျားလျားပြောင်းလဲပြီးကုမ္ပဏီတွေကသူတို့ရဲ့ Insta စတိုးဆိုင်ကိုသုံးတဲ့ပုံစံကိုပြောင်းလဲလိုက်ကြတယ်။.
စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များအတွက်, Instagram app ကိုစွန့်ခွာစရာမလိုဘဲထုတ်ကုန် ၀ ယ်စရာမလိုဘဲသူတို့ရဲ့ ၀ ယ်လိုအားကိုလျင်မြန်စွာပြောင်းပေးနိုင်စွမ်းကရောင်းအားနှုန်းကိုမြင့်တက်စေပါသည်.
လုပ်ငန်းများ, ပု လွှမ်းမိုးသူများ ငွေပေးချေမှုလုပ်ဆောင်ချက်နှင့်သုံးစွဲသူများသည်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချိန်များကိုတွေ့ကြုံခံစားကြလိမ့်မည်.
သင် Instagram Checkout ကိုသုံးသင့်သလား?
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်ကြော်ငြာခြင်းအတွက် Insta ပလက်ဖောင်းကိုသုံးနေသည်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပါပြီ။, ကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာများအတွက်အရေးပါပုံကိုငါတို့သိသည်.
Instagram Checkout အင်္ဂါရပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားလွယ်ကူသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုပေးသည်, သူတို့ကငါတို့ထုတ်ကုန်တွေကို ၀ ယ်နိုင်တယ်.
သူတို့သည်စတိုးဆိုင်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအရယေဘူယျအားဖြင့် Insta တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းကြီးထွားအောင်ကူညီရန် QR ကုဒ်ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့သည်.
Instagram မှာဖော်ပြထားပါတယ် que 80 % des comptes suivent un compte d’entreprise, ငါတို့ကငါတို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းထဲကအကောင်းဆုံးကိုရအောင်သေချာကြိုးစားခဲ့ကြတာလဲဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြတယ်.
သုံးစွဲသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များကိုရိုးရှင်းသောအဆင့်များဖြင့် ၀ ယ်ယူနိုင်ပုံကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်:
• ၀ ယ်ယူမှုသင်္ကေတကိုနှိပ်ပါ
Instagram Checkout အတွက်မည်သို့လျှောက်ထားရမည်နည်း?
အမေရိကန်မှာအခုဆိုရင် Instagram Checkout ကိုသင်သုံးနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့စတိုးဆိုင်ကိုအရင်ဆုံး configure လုပ်ရမယ်.
ထို့ကြောင့်သင်၏အကောင့်ကိုသင်၏ Facebook စာမျက်နှာသို့ Shopify သို့ချိတ်ဆက်ထားသည်, Insta သည်သင်၏ catalog နှင့်ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်.
Insta သည်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းတံဆိပ်များကိုဖန်တီးရန်သင်၏အချက်အလက်တံဆိပ်များကို သုံး၍ သင်၏ထုတ်ကုန်များအားသင်၏ဓါတ်ပုံများတွင် tag တွဲပေးနိုင်သည်, ဗွီဒီယိုများနှင့် IGTV ယခု.
သင်၏စတိုးဆိုင်ကိုအောင်မြင်စွာတည်ဆောက်ပြီးနောက်, သင်သုံးနိုင်သည် ဒီပုံစံဒီမှာ ငွေရှင်းရန်တောင်းဆိုရန်.
သင်ဟာအမေရိကန်မှာမဟုတ်ဘူး, ပြင်ဆင်ပြီးသင်၏စတိုးဆိုင်ကိုဖန်တီးပါ. ၎င်းကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ဖြန့်ကျက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ငွေပေးချေမှုလုပ်ဆောင်ချက်ကိုသုံးရန် ဦး စွာစတင်ပါ.
သင်၏ Instagram Checkout အင်္ဂါရပ်မှအကောင်းဆုံးရရန်သင့်အတွက်အနည်းငယ်အကြံပြုချက်များရှိသည်။, ဤနည်း, မင်းရဲ့ရောင်းအားကိုမြှင့်တင်ဖို့သေချာနိုင်တယ်.
သင်၏ရောင်းအားကိုမြှင့်တင်လိုလျှင်သင်၏တံဆိပ်များကိုကန့်သတ်မထားပါနှင့်. အကြောင်းအရာတစ်ခုစီတွင်သင်၏ထုတ်ကုန်များကို tag တွဲရန်အမြဲသတိရပါ. ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများမှအကောင်းဆုံးကိုရယူပါ.
မတူညီသောအကြောင်းအရာပုံစံများပေါ်တွင် tag များကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်, မင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်တဲ့လူတွေဆီကိုတတ်နိုင်သမျှများများရောက်အောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ.
မင်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုများများမြင်နိုင်လေလေ, checkout feature မှတဆင့်မင်းရဲ့ပရိသတ်ကိုသတိထားဖို့နဲ့ ၀ ယ်ဖို့ပိုလွယ်တယ်.
လွှမ်းမိုးသူများသည်ကြီးမားသည်, ပြီးတော့သူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေကိုအနီးကပ်လေးစားကြတယ်. သူတို့ကသူတို့လုပ်တဲ့နေရာမှာအရမ်းတော်တဲ့အတွက်ငါတို့ကသူတို့ကို credit ပေးရမယ်.
၎င်းတို့အများစုသည်၎င်းတို့၏သစ္စာရှိနောက်လိုက်များအတွက်မူရင်းအကြောင်းအရာများကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ဖြင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ပလက်ဖောင်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်အောင်မြင်စေခဲ့သည်။. ဒါကသူတို့ကအသက်မွေးတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ကတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုကိုသိရမယ်.
လွှမ်းမိုးမှုရှိသူများနှင့်ဖန်တီးသူအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူများနှင့်ပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့်ထုတ်ကုန်များကို၎င်းတို့၏အကြောင်းအရာများတွင်တိုက်ရိုက် tag လုပ်နိုင်သည်, မင်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုသူတို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာပိုပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြော်ငြာနိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့.
မင်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုသူတို့နောက်လိုက်တွေကအရမ်းမြန်မြန်သတိထားမိမှာမဟုတ်ဘူး, ဒါပေမယ့်လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြော်ငြာဖို့ထက်မြက်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်, မင်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းဖို့မကြိုးစားဘဲ.
မင်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေအတွက်အဝိုင်းလေးသုံးတာကမင်းပရိသတ်ကိုပိုမြန်မြန်ရောက်နိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်ထိထိရောက်ရောက်. မင်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုပိုအမြင်အာရုံပိုရလေလေ, မင်းရဲ့ပရိသတ်ရဲ့အာရုံကိုဖမ်းစားဖို့ပိုလွယ်လိမ့်မယ်.
တီထွင်ဖန်တီးပါ၊ သင်၏ထုတ်ကုန်အချို့နှင့်ပုံများကိုဖန်တီးပါ. ဒီလိုမျိုး, အကြောင်းအရာတစ်ခုတွင်ထုတ်ကုန်အနည်းငယ်ကိုသင် tag မပြုနိုင်ပါ, ဒါပေမယ့်ဒီထုတ်ကုန်တွေကိုအတူတကွပိုပြီးမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထောက်ပြဖို့လည်းလိုပါတယ်.
စတိုးဆိုင်နှင့်ငွေပေးချေမှုလုပ်ဆောင်ချက်များသည် Insta ကိုယခင်ကထက်ပိုမိုကြီးမားသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ်လျင်မြန်စွာပြောင်းလဲစေသည်. စောင့်ကြည့်နေပါ၊ ဖြန့်ချိထားသောရှိပြီးသားနှင့်အသစ်သောအင်္ဂါရပ်များအားလုံးနှင့်သင်ရင်းနှီးပါစေ။.
Instagram အဖွဲ့သည်သင်၏လိုအပ်ချက်နှင့်မျှော်လင့်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းအလွန်ကြိုးစားခဲ့သည်, ဒါကြောင့်သင်ပေးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးအားလုံးကိုအပြည့်အဝအသုံးချမယ်ဆိုတာသေချာပါစေ.
ယခင်ဆောင်းပါးIGTV စျေးဝယ်ခြင်းကို Instagram တွင်ယခုရနိုင်သည်
နောက်ဆောင်းပါးInstagram ကိုအလိုအလျောက် Like လုပ်ပါ: အလိုအလျောက်နှစ်သက်မှုအတွက် Bot